မန္တလေးမြို့ ပစ်ခတ်မှုအတွင်း ဒဏ်ရာရသူ ( ၂၀ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၂၁ စနေနေ့)
မန္တလေးမြို့မှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြနေကြတဲ့သူတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက စနေနေ့မှာ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့် အနည်းဆုံး ၂ ဦး သေဆုံးပြီး အတော်များများ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို အနီးကပ် ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြင် ဒဏ်ရာရလာတဲ့ လူနာတွေကို အန္တလေး ၄၁ လမ်းမှာရှိတဲ့ စိန်ပန်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း ကုသမှုပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တဦးကို ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် မမေခက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေခ။ ။“ဆရာတို့ တွေ့ရတဲ့ အခြေနေလေး ပြောပြပေးပါ။”
ဆရာဝန် ။ ။“ဒီကနေ့ တနာရီက ကျနော်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ အဲဒီမှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်နေပြီ။ ပစ်နေပြီ ကြားတော့ ကျနော် နေ့လည် တနာရီကျော်မှာ လိုက်သွာတာ။ ကျနော်တို့က ၄၁ လမ်းကနေ သွားတာပေါ့နော်။ အဲဒီလို သွားနေတဲ့ အချိန်မှာ ဟိုဘက်မှာက ၃၅ လမ်းဘက်မှာ ပစ်နေပြီ။ အဲဒီဘက်မှာလည်း ကားတွေ ပိတ်တယ်။ ကျနော်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ကားတွေလည်း၊ လမ်းတွေလည်း ပိတ်သွားပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့လည်း စောင့်ကြည့်တာ ပေါ့နော်။ ဟို အခြေနေ ခက်မလား စောင့်ကြည့်တယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ အဓိကက လူနာတင်မယ်ပေါ့နော်။ နောက် တခုခု အဖမ်းအဆီး ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့က camp ကို သယ်လာမယ်။ နဲနဲပါးပါး ဆိုရင်တော့ အဲဒီမှာတင် ဆေး ရှေးဦးသူနာ ပြုတာဘာညာပေါ့နော်။ အကြီးကြီး ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က camp စခန်းမှာ ချုပ်တာ ဘာညာ လုပ်ပေးတာပေါ့နော်။ ပုံမှန်က ကျနော်တို့ လုပ်နေကျ ပေါ့နော့။
ဆရာဝန် ။ ။“အဲဒီတော့ ဒီကနေ့က ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော်တို့က တနာရီကျော်ကနေ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲဒီ ၄၁ လမ်းကို ဟိုဘက်ကနေ တာရိုး ဟိုဘက်က တောင်ဘက်က နေပြီးတော့ ကားတွေ တက်လာတယ်။ စစ်တပ်ကားတွေ။ ရဲကားလည်း ပါတယ်။ အဲဒါက ကျနော်ထင်တယ်။ may be ၃ နာရီ ဝန်းကျင်လောက် ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ ပြည်သူတွေက ပိတ်ထားတယ်။ လမ်းကို ပိတ်ထားတယ်။ ရဲကားတွေမလာအောင် လို့ပေါ့နော်။ ၄၁ လမ်းကနေ ပိတ်ထားတာ ရှိတယ်ပေါ့နော်။
အဲဒီလို ပိတ်ထားတော့ အဲဒီမှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ကျနော်တို့က စောင့်ကြည့်တယ် ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က အစတုန်းက တာရိုးပေါ့နော်။ ၄၁ လမ်း တာရိုး ကနေပြီးတော့ ကားတွေက စောင့်နေတယ်ပေါ့ နော်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ အဲဒီစစ်တပ်က ရောက်လာတယ်။ ဒိုင်းတွေနဲ့ ရောက်လာတယ်။ ရဲတွေ မဟုတ်ဖူးဗျ စစ်ကားတွေ။ စစ်ကားတွေ ရောက်လာတော့ ကျနော်တို့က တဖြေးဖြေးနဲ့ နောက်ကို တပြ ဆုတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ တပြ။ ၄၁ လမ်းကို တပြ ဆုတ်ပြီးတော့ အခြေနေ စောင့်ကြည့်တယ်။
အဲဒီမှာ အကြာကြီးပဲဗျ။ အကြာကြီးပဲ စောင့်နေတယ်။ သူတို့က။ ညနေစောင်းလောက်မှ ၄ နာရီ ကျော်လောက်မှ။ စ ပစ်တာကတော့ မျက်ရည်ယိုဗုံးပဲ။ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ ပစ်တယ်။
ဆရာဝန် ။ ။“ဗုံးဗုံးဆို ပစ်တဲ့အခါကျတော့ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ၊ ရာဘာကျည်တွေလည်း. ပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ပေးရသလဲ ဆိုတော့ အဲဒီမှာလူငယ်တွေ ပြေးလာတဲ့ အခါကျတော့ မျက်လုံးတွေက ရဲနေတာကိုး။ ကျနော်တို့က ရေဘူးပဲ ပေးရတာပေါ့။ ရေတွေ ပေးတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျနော်တို့ကားက နောက် ထပ် ၂ ပြ ထပ်ဆုတ်သွားတယ်။ တာရိုးကနေ နောက် ၂ ပြထပ်ဆုတ်တာပေါ့နော်။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ ကျနော်တို့က စတည်းချလိုက်တယ်။ သူက ဆက်တိုက်ပစ်နေတာခင်ဗျ။ ကျနော် မှတ်မိသလောက် အချက်ပေါင်း ၅၀ နဲ့ ၁၀၀ ကြားပဲ။ အနည်းဆုံးပဲ အဲဒါ။
ဆရာဝန် ။ ။“အဲလို ပစ်တဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်တို့က တာရိုးကနေ စောင့်တယ်။ အဲဒီလိုစောင့်နေချိန်မှာ ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့ မထူးတော့ဘူး။ camp က ဆရာတွေ ကိုလည်း ခေါ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ အထိုင်ပေါ့နော်။ ကူညီမယ်ပေါ့။ ကွဲ - ရှလာတဲ့သူတွေကို ချုပ်တာတွေ ဘာတွေ လုပ်ပေးမယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ တော်တော် ဆိုးသွားတယ်ဗျ။ ကျနော်သိတာက အဲဘက်မှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျည်ဆံတွေပါ- အဲ ရာဘာကျည်ဆံ မဟုတ်တော့ ဘူးပေါ့နော်။ ကျည်အစစ်တွေနဲ့ ပစ်တယ်ဆို ကြားလာရတယ်ခင်ဗျ။”
မန္တလေး လုံခြုံရေးတပ်မှ ပစ်ခတ်သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများ
ဆရာဝန် ။ ။“အဲဒီမှာ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ်ပဲခင်ဗျ။ ကျနော်တို့က တာရိုးကနေ ၂ ပြ ခင်ဗျ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ တောင် ဝပ်နေရတာ။ ကျနော်တို့က ဝပ်နေရတာ။ ကျနော်တို့ အခြေနေ တောင်မှလေ။ အခုဟာက ဘယ်လိုလည်း ဆိုတော့ ကျနော်တို့ သိတာ။
ကျနော် သိတဲ့ဟာကိုပဲ ကျနော်ပြောပြမယ်နော်။ ကျနော်တို့ ဆီကို ရောက်လာတဲ့ ကောင်လေးကတော့ ဦးခေါင်း ပွင့်သွားတယ်။ ကျနော်လည်း ခုမှပြန်လာတာ။ ဒါတောင် မာရှယ်လောနဲ့ ထိလို့ ကျနော်တို့က။ ၇ နာရီ လောက်မှ ပြန်လာတာပေါ့လေ။ ဆိုတော့ ကျနော်တိှု့ဆီ ရောက်လာတဲ့ ကောင်ကလေးကတော့ ဦးနှောက်ထိပြီးတော့ သေသွားတယ်။ ရောက်လာတော့ အသက်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်။ ခေါင်းပွင့် သွားတယ်ပေါ့နော်။ တယောက်ပါတယ်။
နောက်တယောက်ကတော့ ပေါင်အကြီးကြီးပွင့်ထွက်သွားတယ်။ ပွင့်ထွက်သွား ပြီးတော့မှာ ရှော့နဲ့ရောက်လာတယ်။ မေ့ချင်သလိုလို ဖြစ်နေပြီ။ သွေးထွက် လွန်နေပြီ။ ပေါင်ကြီးက စုတ်ပြတ်နေတာ။ ပုံတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျနော်က သူ သွေးထွက် မလွန်အောင် ကြပ်ထုပ်တွေစည်း။ စည်းပြီးတော့ ဆေးတွေ ပေးပြီးတော့ ဆေးရုံကြီးကို လွှတ်လိုက်ရတယ် ပေါ့နော်။ လောလောဆယ်ကတော့ ...။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ လောလောဆယ်တော့ အဲဒီ ဆေးရုံကြီးမှာလည်း ကျနော်တို့သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်တွေ၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေ ရှိတယ်လေ။ အဲဒီ လက်ရှိ လူနာအခြေနေ မသိသေးဘူး။ သေလားရှင်လား မသိသေးဘူး။ သေချာတာကတော့ အသက်ရှင်ဖို့ များပါတယ်။ ဆေးရုံပေါ် ရောက်သွားတယ် ပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ကြားထဲမှာ ကျနော်တို့ ချုပ်ပေးရတာ။ အသေးအမွှားလေးတွေ ပေါ့နော်။ လက်မောင်း ချုပ်ပေးရတာ။ လက်မှာ ပွင့်ထွက်သွားတာတို့ စုတ်ပြတ်သွားတာတို့ဗျ။ ခဲ- ခဲတွေ ပေါ့နော်။ ခဲတွေပါမယ်ခင်ဗျ။ အနာကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ တချို့ ခဲကျည်ဆံ ထိတာတွေ ပါတယ် ပေါ့နော်။ အဲဒါမျိုး ပုံစံတွေ ထိတဲ့ လူက ၆ ယောက် ၇ ယောက်လောက် ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ချုပ်ပေးရတာ။ ကျန်တာကတော့ မူးတာတို့ ဘာတို့ ပေါ့နော်။ အဲဒါက လက်ရှိ ဖြစ်တဲ့ အခြေနေပေါ့။”
ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောရင် ကျနော်က ပြင်ပဆရာဝန်။ တခါမှလည်း အဲဒီလိုမျိုးကြီး .. ကျနော့်အနေနဲ့ ရှေ့တန်းကို ရောက်သွား သလိုမျိုးကြီး။ ဒီလောက်အထိ ခံစားရတယ်။ တကယ်ဆို ကိုယ်တွေတောင် ပုန်းနေရတာလေ။ နောက်တခုက ကြားရတဲ့ သတင်း။ တကယ်က ဖြစ်ရပ်အမှန်ပါ။ အဲဒီမှာ သွားကောက်လို့ မရဘူ။ အထဲမှာ ခိုက်မိနေတယ်။ အဲဒီလူတွေကို သွားကောက်လို့ မရဘူး။ ခိုက်မိလိ်ု့ သွားကောက်တဲ့ လူတွေကို ပစ်နေတယ်ဗျ။ ပြန်ကောက်လို့ မရဘူး ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ စနိုက်ပါ သမားတောင် ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ may be ပေါ့နော် ကျနော်တော့ သေချာတော့ မသိဘူး။ သူတို့ ပြောတဲ့ စကားပေါ့နော်။ ကျနော်တို့လည်း. ပိတ်မိနေတော့ အပြင်ထွက်လို့ မရဘူး။. အဲဒီ မသွားတော့ဘူး။ ခေါ်လာတဲ့ လူနာတွေကို အဲဒီ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ အထိုင်ချပြီးတော့ ဆရာဝန်တွေ ထပ်ခေါ်တယ်။ ကျနော်တို့ ဆရာဝန်တွေ ၃ ယောက် ပေါ့နော်။ ပထမ ကျနော် တယောက်ထဲသွားရင်း နောက် တဖြေးဖြေး ၂ ယောက် ထပ်ခေါ်တယ်။ ၃ ယောက် လာတယ်။ နောက် အဲဒီဆရာဝန်လေး အငယ်လေး တယောက် လာတယ် ပေါ့နော်။ အားလုံး ၄ ယောက် ပေါ့နော်။ အဲဒီ ကျနော်တို့ ကုပေးတာ။ လောလောဆယ် ကျနော်တို့ လုပ်ပေးတဲ့ဟာ ပေါ့နော်။ အခုမှ ကျနော် အိမ်ပြန် ရောက်တာ ပေါ့နော်။”
မေခ ။ ။“ဆရာတို့က ဆရာဝန်တွေလည်း ဖြစ်တယ်။ သေသေချာချာလည်း အဲဒီ အခြေအနေမှာ ဆေးကုသပေးခဲ့တာ ဆိုတော့ အခုလို ဖြိုခွင်းတဲ့ နေရာမှာ တချို့ တွေက အကုန်ပြောနေတာက ကျည်အစစ်တွေလို့လည်း ပြောတယ်။ ကျမတို့ ဓါတ်ပုံတွေမှာ တွေ့နေတာ မျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။ ဆရာတို့ ကျတော့ ဒီ ဒဏ်ရာတွေကို ကြည့်တာနဲ့ ပြောနိုင်တာဆိုတော့ ဒီအခြေနေကို ဆရာဘာများ ပြောနိုင်မလဲရှင့်။”
ဆရာဝန် ။ ။“ဟာ ကျည်အစစ် သေချာတာ ပေါ့ဗျာ။ ဦးနှောက်ကြီး ပွင့်ထွက်သွားတာ ကြီးကိုက ရာဘာကျည်မှ မဟုတ်တာ။ ကျနော်ပြောတာက ရာဘာကျည်ဆို ဒီလို ပွင့်ထွက် သွားစရာ အကြောင်း မရှိဘူးလေ။ ပွင့်ထွက်သွားတာလေ။ ပြီးတော့ တချို့ သက်သေတွေလည်း ရှိပါတယ် ခင်ဗျ။ အိမ်တွေ၊ နံရံတွေမှာလေ ကျည်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေ ကျနော်တို့ ကြားတယ် ပေါ့နော်။ ဒါကတော့ ကျည်အစစ်ပါပဲဗျ။ အဲဒီမှာ ရာဘာကျည်တွေလည်း ပါတယ်။ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေလည်း ပါတယ်။ တောက်လျှောက်ပဲ ကြားနေရတာဗျာ။ အချက် ၁၀၀ ၊ ကျနော် မရေထာမိလို့ အချက် ရာကျော်မယ်။ အဲလိုကြားနေရတယ်။ အုန်းအုန်းအုန်းနဲ့ ကြားနေရတယ် ဆိုတော့။ ဟုတ်တယ်။ အသံတွေကတော့ မတူဘူး။ သေနတ် တွေ အသံတွေ မတူဘူး။ ပစ်တဲ့ အသံတွေလည်း မတူဘူး။
နောက်တခုက ဆွဲတာလည်း ပါတယ်ခင်ဗျ။ တချက်တချက် ဆွဲတဲ့ အသံတွေ စတင်းဂန်း ဆွဲတဲ့ အသံမျိုးလေ။ တောက်လျှောက်ပဲ။ ကျနော်က ဆရာဝန်ဆိုတော့ လက်နက် အကြောင်းတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒလစပ် ဆွဲတဲ့ အသံတော့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စစ်တိုက်သလိုမျိုး ပေါ့ဗျာ။ စစ်ကားထဲက လိုမျိုးပေါ့။ စတင်းဂန်းနဲ့ ဒလစပ် ဆွဲတဲ့ အသံမျိုး။ အဲဒါ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင် ကြားတယ်။ အဲဒါက တောက်လျှောက် ဆွဲပြီး ပစ်တဲ့ အသံမျိုး ပေါ့နော်။ အဆက်မပြတ် ဆွဲပြီး ပစ်တဲ့ အသံမျိုးတွေ ကြားတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ကြားတဲ့ အသံပဲ။”
မေခ။. ။“နောက်တခုက အဲဒီမှာက ဘယ်လိုကြောင့် အခုလို တင်းမာမှု ဖြစ်သွားတာလဲ ဆိုတာရော သိရပါလား။ ဆရာ စောစောက ပြောတဲ့ သဘောအရဆို ဆရာတို့က အဲဒီနားမှာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ခဲ့ရတာဆိုတော့။ တင်းမာမှု တခုကြောင့် ပစ်ရတာလား။ ဒါမှမဟုတ် နောက်တခုက သူတို့တွေ အမြဲတမ်း သုံးနေကျ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ သူတို့က အကြမ်းဖက်မှုကို ပြန်ပြီးတော့ ဖြိုခွင်းတယ် ဆိုတဲ့ အနေထားမျိုး ပြောတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ဆရာတို့ ဘက်ကရော၊ ဘေးက ကြည့်ရတဲ့ အနေဆိုရင် တဖက်ကနေ အကြမ်းဖက်မှု လုပ်လာလို့ ဟိုဘက်ကနေ ဖြိုခွင်းရတဲ့ သဘောလား။ ဘယ်လို များပါလဲရှင့်။”
ဆရာဝန် ။ ။“အဲဒါကို ကျနော်တော့ သေချာ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာ တာကတော့ ကျနော့်အမြင်က သူတို့က ၄၁ လမ်းပိတ်တယ်။ ၃၅ လမ်း ပိတ်တယ်၊ ရေကားတွေ ပါတယ်။ တခုဖြစ်နိုင်တာက ကမ်းရိုးဆိုတာက သဲကားတွေရှိတယ် ခင်ဗျ။ သဲကားတွေက အရှည်ကြီးတွေ။ ၁၂ ဘီးတောင် မကဘူးဗျ။ ဘီးအစိတ်လောက် ရှိတယ်ခင်ဗျ သဲကားဆိုကလေ။ ဒီဘက်က သဲကားကြီးတွေက ပိတ်ထားတယ်။ လမ်းက အထဲကို ဝင်လို့ မရဘူးလေ။ သူတို့က အထဲကို သွားချင်တာ ခင်ဗျ။ အထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ရဲတွေ ရှိမယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဖြိုခွဲတာ ဖြစ်မယ်လို့ ကျနော်တို့က အများဆုံး ယူဆလို့ ရတယ်။
ဒီဘက်ကတော့ ပြည်သူက လက်နက်လည်း မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူက တော့ ရှိတယ်။ အဲဒီ ခဲနဲ့ ပစ်တဲ့ လူတွေဆို သူက ထိန်းတယ်။ ပြည်သူက ပြည်သူချင်း ထိန်းတယ် ခင်ဗျ။ ကျနော်တို့လည်း ပြောတယ်။ ဘေးလူတွေကလည်း ပြောတယ်။ ခင်ဗျား ပြန်မလုပ်နဲ့နော်။ ခဲတွေ မထုနဲ့နော်။ လောက်လေးခွတွေ မပစ်နဲ့နော်။ သင့်တဲ့လူက ပြောတယ်။ လူကြီးတွေ ကလည်း ပြောတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ ပြည်သူသည် ပစ်စရာ လက်နက်လည်း မရှိဘူး။ ပစ်စရာကလည်း ဘာမှ မရှိဘူး။ ခဲတောင် မပစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောလို့ မရဘူး။ တခါတခါ သူတို့လူ တွေက ပစ်လိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါတွေကတော့ ရှိနေတာပဲလေ။ ထွက်တိုင်းမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် စပစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ မရှိဘူး။ ကျနော်က နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျနော်က ပရဟိတ သမား ဆိုတော့ နောက်ဆုတ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒီ စပစ်တဲ့ အသံ ကြားချိန်မှာ မျက်ရည်ယိုဗုံး စပစ်တာ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ပိုဆိုးလာတယ်။ ရာဘာကျည်တွေရော။ ဟိုဟာ တွေရော ပစ်လာတယ်။ အဲလိုမျိုးပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေက သူတို့ ပိတ်သွားတာ၊ လမ်းတွေပိတ်သွားတာလည်း ပါတယ်။”
မေခ ။ ။“နောက်တခု သိချင်တာက သူတို့တွေ ပစ်တဲ့ အခါမှာ ဆရာတို့လည်း ကြားဖူးမှာပါ ဖြိုခွင်းရတဲ့ အဆင့်ဆင့်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ အဆင့်ဆင့် တွေကိုရော လိုက်နာပြီး သူတို့ ဖြိုခွင်းခဲ့တယ်လို့ ဆရာတို့ မြင်ပါသလားရှင့်။”
ဆရာဝန် ။ ။“ဒါကတော့ အဲဒါနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ အဲလိုမဟုတ်ဖူး။ အဲလိုမျိုး မလိုက်နာဘူး။ သူတို့လိုက်နာမှု ရှိမရှိတော့ မသိဘူး။ လိုက်နာတာတော့ မတွေ့ဘူး။ ကျနော် တွေ့နေတာတော့ ဒီအတိုင်း ပစ်နေတာပဲလေ။ အဆင့်ဆင့် ဖြိုခွင်းတာမှ မရှိပဲဗျ။။ ဥပမာ ဒုတ်နဲ့ ရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ တိုးလာရင် ရိုက်တယ်ဆိုရင်။ တဆင့်ပြီး တဆင့် တက်လာတယ် ပေါ့ဗျာ။ ဘယ်သံပေး ညာသံပေး ရိုက်တယ် ဆိုရင် လက်ခံတယ်လေ။ သဘောက။ သူတို့ အနေနဲ့ လမ်းပိတ်နေတယ်။ လမ်းဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် ကားသမားတွေကိုရှင်းလေ။ ကားတွေကို ဆွဲပြီး သူတို့ဖယ်လေ။ ဘယ် .. ဒီလိုမျိုး ဘလိုင်းကြီးနဲ့ ပစ်စရာ အကြောင်းမှမရှိတာလေ။ အဲဒါတော့ ကျနော်တို့ လက်မခံဘူး။ မန္တလေးသားတွေ ဘယ်သူ့သွားမေးမေးဗျာ။ အင်တာနေရှင်နယ် လုပ်တဲ့ကိုင်တဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်ဖူးဗျာ တခြားစီပဲ။ အဲဒီလိုမျိုးပဲ။ ပစ်ချင်လို့ပစ်တဲ့ သဘောပဲဗျာ။ ကျနော်တော့ အဲဒီလို ယူဆတယ်။”
မေခ။ ။“နောက်ဆုံး အနေနဲ့ မေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဆရာက တကယ်လည်း ကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဆေးလည်း ကိုယ်တိုင် ကုခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန် တယောက်အနေနဲ့ ဒီဖြစ်ရပ် အပေါ်မှာ ဘယ်လိုများ ပြောချင်ပါလဲရှင့်။”
ဆရာဝန် ။ ။“ဟာ ဒါကြီးကတော့ဗျာ။ မဖြစ်သင့်တာကြီးပါ။ ကိုယ့်ပြည်သူ ကြီးကို။ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တာကြီးပါ။ ကျနော့် မျက်စိရှေ့မှာ ဒီလိုမျိုး။ တချို့ဆို မူးလဲ သွားတယ်လေ။ သတင်းသမားတွေ တောင်မှ မူးလဲသွားတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဲဒါကြီး ဦးနှောက် ပွင့်ထွက် သွားတာကြီးကို သူတို့ မမြင်ဘူးဘူးလေ။ ကျနော်တို့ ဘက်ကတော့ ဆရာဝန်တွေ ဆိုတော့ သွေးထွက် သံယိုတွေက မထူးဆန်းပါဘူးလေ။ ကျနော်တို့ အတွက်တော့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ဖြစ်ဖြစ် စိတ်မကောင်းဘူးလေဗျား။ ဒါ ဘလိုင်းကြီးလေ။ ကျနော်တို့က စစ်ပွဲဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဖူးလေ။ ကျနော်တို့မှာ လက်နက်တွေ ရှိတာ မဟုတ်ဖူးလေ။ ကျနော်ပြောချင်တာက ရှေ့တန်း စစ်မြေပြင် ရှေ့တန်းကို ရောက်သွား သလိုကြီးဗျ ။ အဲဒါကြီးက ဖြစ်သင့်သလား။ လူနေအိမ်တွေဗျာ။ လူတွေ နေတဲ့ နေရာ၊ လူနေရပ်ကွက်ကြီး ကိုမှ၊ ရပ်ကွက်တွေ ထဲကို ပစ်တယ်။ ရပ်ကွက် ထဲကို လူနေအိမ်တွေ ထဲကို ပစ်တယ်ဗျာ။ စနိုက်ပါတွေ ပါတယ်လည်းကြားတယ်။ ပြီးတော့ ပိုဆိုးတာက သူနာပြုစရာ ကောက်လို့ မရဘူး။ ဆိုတာကြီးကတော့ဗျာ ဘယ်လို ပြောမတုန်း ဆန္ဒပြမှု ဖြိုခွင်းတာလဲ မဟုတ်ဖူးဗျာ။ ဘယ်လိုပြောမလဲ စစ်မြေပြင်လိုကြီး ချသွားတာဗျာ။ စစ်ပွဲတခု ရောက်သွား သလိုပဲ ဗျာ။ ကျနော်တို့တောင်မှာ ပုန်းနေရတယ် ဗျာ။ ဆရာဝန် အဝတ်အစားနဲ့လည်း ထွက်လို့ မရဘူး။ ထွက်ရင် ပစ်မှာ။ ကျနော့်အမြင် ပြောရရင် ဒါကြီးက လုံးဝ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျနော်တို့ စစ်မြေပြင်လည်း မဟုတ်။ သာမန် ပြည်သူတွေ နေတဲ့ အိမ်တွေ လေဗျာ။ အဲလိုကြီးကတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ စိတ်လည်း မကောင်းဘူး။ ဖြစ်လည်း မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျနော်စိတ်ထဲ ထင်တာကတော့ သာမန်ပြည်သူတွေ ထဲမှာပဲ အကာအကွယ်ပေးရမယ် ထင်တာ ၊ အခုကတော့ ခုမြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြီးတွေကတော့ ရှေ့တန်း ရောက်သွား သလိုမျိုးကြီး အဲလိုကြီး ဖြစ်သွားတာ။
မေခ။ ။ ဆရာတို့က ၄၁ လမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ ဆေးကုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်အဖွဲ့နဲ့ တူတယ်နော်။
ဆရာ ။ ။ ဟုတ်တယ် .. ဟုတ်ပါတယ်။
မေခ။ ။ ကျေးဇူးပါရှင့်။
မန္တလေးဆန္ဒျပပြဲက ဒဏ်ရာရသူတြေကို ကုသေပးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန္တဦးရဲ့ အေတြ့အကြုံ
မန္တလေးမြို့မွာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်က်င် ဆန္ဒျပေနကြတဲ့သူတြေကို လုံခြုံရေးတပ္ဖြဲ့တြေက စေနေန့မွာ အကြမ်းဖက် ဖြိုခြင်းခဲ့တာကြောင့် အနည်းဆုံး ၂ ဦး သေဆုံးပြီး အေတ္မာ်ားမ်ား ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ဒျီဖစ္စဥ္ကို အနီးကပ် ကိုယ္တိုင်ကြုံတြေ့ခဲ့ရတဲ့အျပင် ဒဏ်ရာရလာတဲ့ လူနာတြေကို အန္တလေး ၄၁ လမ်းမွာရွိတဲ့ စိန္ပန်းဘုန်းတော်ကြီးကေ်ာင်းဝင်းအတြင်း ကုသမှုပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန္တဦးကို ဗီအြိုအေ သတင်းထောက် မေမခက ဆက်ြသယ် မေျးမန်းထားပါတယ်။
မေခ။ ။“ဆရာတို့ တြေ့ရတဲ့ အျေခေနေလးျေပျာပေပးပါ။”
ဆရာဝန် ။ ။“ဒီကေန့ တနာရီက က်နော်ကြည့်လိုက္တဲ့ အခါ အဲဒီမွာ ရုန်းရင်းဆန္ခတ်ျဖစ်နေပြီ။ ပစ်နေပြီ ကြားတော့ က်နော် နေ့လည် တနာရီကေ်္မွာာ လိုက်ြသာတာ။ က်န္တောို့က ၄၁ လမ်းကေန သြားတာပေါ့နော်။ အဲဒီလို သြားနေတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဟိုဘက္မွာက ၃၅ လမ်းဘက္မွာ ပစ်နေပြီ။ အဲဒီဘက္မွာလည်း ကားတြေ ပိတ္တယ်။ က်နော်သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကားတြေလည်း၊ လမ်းတြေလည်း ပိတ်ြသားပြီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်န္တောို့လည်း စောင့်ကြည့္တာ ပေါ့နော်။ ဟို အျေခေန ခက္မလား စောင့်ကြည့်တယ်။ က်န္တောို့ကေတာ့ အဓိကက လူနာတင္မယ်ပေါ့နော်။ နောက် တခုခု အဖမ်းအဆီး ဆိုရင္လည်း က်န္တောို့က camp ကို သယ္လာမယ်။ နဲနဲပါးပါး ဆိုရင်တော့ အဲဒီမွာတင် ဆေး ရွေးဦးသူနျာပုတာဘာညာပေါ့နော်။ အကြီးကြီး ဆိုရင်တော့ က်န္တောို့က camp စခန်းမွာ ခ်ုပ္တာ ဘာညာ လုပ်ပေးတာပေါ့နော်။ ပုံမွန္က က်န္တောို့ လုပ်နေက် ပေါ့နော့။
ဆရာဝန် ။ ။“အဲဒီတော့ ဒီကေန့ကျဖစ္ခ်င်တော့ က်န္တောို့က တနာရီကေ်ာ်ကေန သြားရင်းလာရင်းနဲ့ နောက္ပိုင်းက်တော့ အဲဒီ ၄၁ လမ်းကို ဟိုဘက္ကေန တာရိုး ဟိုဘက္က တောင္ဘက္က နေပြီးတော့ ကားတြေ တက္လာတယ်။ စစ္တပ္ကားတြေ။ ရဲကားလည်း ပါတယ်။ အဲဒါက က်န္ထောင္တယ်။ may be ၃ နာရီ ဝန်းက်င်လောက် ပေါ့နော်။ အဲဒီမျွာပည်သူတြေက ပိတ္ထားတယ်။ လမ်းကို ပိတ္ထားတယ်။ ရဲကားတြေမလာအောင် လို့ပေါ့နော်။ ၄၁ လမ်းကေန ပိတ္ထားတာ ရွိတယ်ပေါ့နော်။
အဲဒီလို ပိတ္ထားတော့ အဲဒီမွာ ရုန်းရင်းဆန္ခတ် ဘယ္လျိုဖစ္မလဲ က်န္တောို့က စောင့်ကြည့္တယ် ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ က်န္တောို့က အစတုန်းက တာရိုးပေါ့နော်။ ၄၁ လမ်း တာရိုး ကေနပြီးတော့ ကားတြေက စောင့်နေတယ်ပေါ့ နော်။ တျေဖျးေဖးနဲ့ အဲဒီစစ္တပ္က ရောက္လာတယ်။ ဒိုင်းတြေနဲ့ ရောက္လာတယ်။ ရဲတြေ မဟုတ္ဖူးဗ် စစ္ကားတြေ။ စစ္ကားတြေ ရောက္လာတော့ က်န္တောို့က တျေဖျးေဖးနဲ့ နောက္ကို တျပ ဆုတ္လိုက္တယ်ပေါ့။ တျပ။ ၄၁ လမ်းကို တျပ ဆုတ်ပြီးတော့ အျေခေန စောင့်ကြည့္တယ်။
အဲဒီမွာ အကြာကြီးပဲဗ်။ အကြာကြီးပဲ စောင့်နေတယ်။ သူတို့က။ ညေနေစာင်းလောက္မွ ၄ နာရီ ကေ်ာ်လောက္မွ။ စ ပစ္တာကေတာ့ မ်က်ရည်ယိုဗုံးပဲ။ မ်က်ရည်ယ္ဗိုံးတြေ ပစ္တယ်။
မန္တလေးမြို့ခံမှ ရရှိသိမ်းဆည်းထားသည်း ကျည်ခွံ
ဆရာဝန် ။ ။“ဗုံးဗုံးဆို ပစ္တဲ့အခါက်တော့ မ်က်ရည်ယိုဗုံးတြေ၊ ရာဘာက်ည်တြေလည်း. ပါတယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီမွာ က်န္တောို့ ဘာလုပ်ပေးရသလဲ ဆိုတော့ အဲဒီမွာလူငယ်တြေျေပးလာတဲ့ အခါက်တော့ မ်က္လုံးတြေက ရဲနေတာကိုး။ က်န္တောို့က ရေဘူးပဲ ပေးရတာပေါ့။ ရေတြ ပေးတယ်။ အဲဒီအခါမွာ က်န္တောို့ကားက နောက် ထပ် ၂ျပ ထပ္ဆုတ်ြသားတယ်။ တာရိုးကေန နောက် ၂ျပထပ္ဆုတ္တာပေါ့နော်။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ဘုန်းကြီးကေ်ာင်းထဲမွာ က်န္တောို့က စတည်းခ်လိုက္တယ်။ သူက ဆက္တိုက္ပစ်နေတာခင္ဗ်။ က်နော် မွတ္မိသေလာက် အခ်က်ပေါင်း ၅၀ နဲ့ ၁၀၀ ကြားပဲ။ အနည်းဆုံးပဲ အဲဒါ။
ဆရာဝန် ။ ။“အဲလို ပစ္တဲ့ အခါက်တော့ က်န္တောို့က တာရိုးကေန စောင့်တယ်။ အဲဒီလိုစောင့်နေခ်ိန္မွာ က်န္တောို့ ဆုံျးဖတ္လိုက္တာကေတာ့ မထူးတော့ဘူး။ camp က ဆရာတြေ ကိုလည်း ခေါ်ပြီးတော့ က်န္တောို့ ဘုန်းကြီးကေ်ာင်းမွာပဲ အထိုင်ပေါ့နော်။ ကူညီမယ်ပေါ့။ ကြဲ - ရွလာတဲ့သူတြေကို ခ်ုပ္တာတြေ ဘာတြေ လုပ်ပေးမယ်ပေါ့။ အဲဒီမွာ တော်တော် ဆိုးသြားတယ္ဗ်။ က်နော်သိတာက အဲဘက္မွာ တျေဖျးေဖးနဲ့ က်ည္ဆံတြေပါ- အဲ ရာဘာက်ည္ဆံ မဟုတ်တော့ ဘူးပေါ့နော်။ က်ည်အစစ်တြေနဲ့ ပစ္တယ္ဆို ကြားလာရတယ္ခင္ဗ်။”
ဆရာဝန် ။ ။“အဲဒီမွာ ရုန်းရင်း ဆန္ခတ္ပဲခင္ဗ်။ က်န္တောို့က တာရိုးကေန ၂ျပ ခင္ဗ်။ ဘုန်းကြီးကေ်ာင်းထဲမွာ တောင် ဝပ်နေရတာ။ က်န္တောို့က ဝပ်နေရတာ။ က်န္တောို့ အျေခေန တောင္မွေလ။ အခုဟာက ဘယ္လိုလည်း ဆိုတော့ က်န္တောို့ သိတာ။
က်နော် သိတဲ့ဟာကိုပဲ က်နော်ျေပျာပမယ်နော်။ က်န္တောို့ ဆီကို ရောက္လာတဲ့ ကောင်လေးကေတာ့ ဦးခေါင်း ပြင့်သြားတယ်။ က်န္လောည်း ခုမျွပန္လာတာ။ ဒါတောင် မာရွယ်လောနဲ့ ထိလို့ က်န္တောို့က။ ၇ နာရီ လောက္မျွပန္လာတာပေါ့လေ။ ဆိုတော့ က်န္တောိွု့ဆီ ရောက္လာတဲ့ ကောင္ကေလးကေတာ့ ဦးနွောက္ထိပြီးတော့ သေသြားတယ်။ ရောက္လာတော့ အသက်္မပါတော့ဘူးပေါ့နော်။ ခေါင်းပြင့် သြားတယ်ပေါ့နော်။ တေယာက္ပါတယ်။
နောက္တေယာက္ကေတာ့ ပေါင်အကြီးကြီးပြင့်ထြက်ြသားတယ်။ ပြင့်ထြက်ြသား ပြီးတော့မွာ ရွော့နဲ့ရောက္လာတယ်။ မေ့ခ်င်သလိုလျိုဖစ်နေပြီ။ သြေးထြက် လြန်နေပြီ။ ပေါင်ကြီးက စုတ်ျပတ်နေတာ။ ပုံတြေလည်း ရွိတယ်။ အဲဒီအခါက်တော့ က်န္ကော သူ သြေးထြက် မလြန်အောင် ကြပ္ထုပ်တြေစည်း။ စည်းပြီးတော့ ဆေးတြေ ပေးပြီးတော့ ဆေးရုံကြီးကို လြွှတ္လိုက်ရတယ် ပေါ့နော်။ လောလောဆယ္ကေတာ့ ...။ မတတ်နိုင္ဘူးလေ။ လောလောဆယ်တော့ အဲဒီ ဆေးရုံကြီးမွာလည်း က်န္တောို့သူငယ္ခ်င်း ဆရာဝန်တြေ၊ ခြဲစိတ္ဆရာဝန်တြေ ရွိတယ်လေ။ အဲဒီ လက်ရွိ လူနာအျေခေန မသိသေးဘူး။ သေလားရွင္လား မသိသေးဘူး။ သေခ်ာတာကေတာ့ အသက်ရွင္ဖို့ မ်ားပါတယ်။ ဆေးရုံပေါ် ရောက်ြသားတယ် ပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ကြားထဲမွာ က်န္တောို့ ခ်ုပ်ပေးရတာ။ အေသးအမွှားလေးတြေ ပေါ့နော်။ လက်မောင်း ခ်ုပ်ပေးရတာ။ လက္မွာ ပြင့်ထြက်ြသားတာတို့ စုတ်ျပတ်ြသားတာတို့ဗ်။ ခဲ- ခဲတြေ ပေါ့နော်။ ခဲတြေပါမယ္ခင္ဗ်။ အနာကို ကြည့်လိုက္တဲ့ အခါက်တော့ တခ်ို့ ခဲက်ည္ဆံ ထိတာတြေ ပါတယ် ပေါ့နော်။ အဲဒါမ်ိုး ပုံစံတြေ ထိတဲ့ လူက ၆ ယောက် ၇ ယောက်လောက် ရွိတယ်။ က်န္တောို့ ခ်ုပ်ပေးရတာ။ က်န္တာကေတာ့ မူးတာတို့ ဘာတို့ ပေါ့နော်။ အဲဒါက လက်ရျွိဖစ္တဲ့ အျေခေနေပါ့။”
က်နော့်အေနနဲ့ျေပာရင် က်န္ကေျာပင္ပဆရာဝန်။ တခါမွလည်း အဲဒီလိုမ်ိုးကြီး .. က်နော့်အေနနဲ့ ရွေ့တန်းကို ရောက်ြသား သလိုမ်ိုးကြီး။ ဒီလောက်အထိ ခံစားရတယ်။ တကယ္ဆို ကိုယ်တြေတာင် ပုန်းနေရတာလေ။ နောက္တခုက ကြားရတဲ့ သတင်း။ တကယ္ကျဖစ်ရပ်အမွန္ပါ။ အဲဒီမွာ သြားကောက္လို့ မရဘူ။ အထဲမွာ ခိုက္မိနေတယ်။ အဲဒီလူတြေကို သြားကောက္လို့ မရဘူး။ ခိုက္မိလိ်ု့ သြားကောက္တဲ့ လူတြေကို ပစ်နေတယ္ဗ်။ျပန်ကောက္လို့ မရဘူး ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ စနိုက္ပါ သမားတောင် ပါတယ္လို့ျေပာတယ်။ may be ပေါ့နော် က်နော်တော့ သေခ်ာတော့ မသိဘူး။ သူတို့ျေပာတဲ့ စကားပေါ့နော်။ က်န္တောို့လည်း. ပိတ္မိနေတာ့ အျပင္ထြက္လို့ မရဘူး။. အဲဒီ မသြားတော့ဘူး။ ခေါ်လာတဲ့ လူနာတြေကို အဲဒီ ဘုန်းကြီးကေ်ာင်းမွာပဲ အထိုင္ခ်ပြီးတော့ ဆရာဝန်တြေ ထပ်ခေါ်တယ်။ က်န္တောို့ ဆရာဝန်တြေ ၃ ယောက် ပေါ့နော်။ ပထမ က်နော် တေယာက္ထဲသြားရင်း နောက် တျေဖျးေဖး ၂ ယောက် ထပ်ခေါ်တယ်။ ၃ ယောက် လာတယ်။ နောက် အဲဒီဆရာဝန်လေး အငယ်လေး တေယာက် လာတယ် ပေါ့နော်။ အားလုံး ၄ ယောက် ပေါ့နော်။ အဲဒီ က်န္တောို့ ကုပေးတာ။ လောလောဆယ် က်န္တောို့ လုပ်ပေးတဲ့ဟာ ပေါ့နော်။ အခုမွ က်နော် အိမ်ျပန် ရောက္တာ ပေါ့နော်။”
မေခ ။ ။“ဆရာတို့က ဆရာဝန်တြေလည်ျးဖစ္တယ်။ သေသခ်ာခ်ာလည်း အဲဒီ အျေခအေနမွာ ဆေးကုသေပးခဲ့တာ ဆိုတော့ အခုလို ဖြိုခြင်းတဲ့ နေရာမွာ တခ်ို့ တြေက အကုန်ျေပာနေတာက က်ည်အစစ်တြေလို့လည်းျေပာတယ်။ က်မတို့ ဓါတ္ပုံတြေမွာ တြေ့နေတာ မ်ိုးတြေလည်း ရွိတယ်။ ဆရာတို့ က်တော့ ဒီ ဒဏ်ရာတြေကို ကြည့်တာနဲ့ျေပာနိုင္တာဆိုတော့ ဒီအျေခေနကို ဆရာဘာမ်ားျေပာနိုင္မလဲရွင့်။”
ဆရာဝန် ။ ။“ဟာ က်ည်အစစ် သေခ်ာတာ ပေါ့ဗ်ာ။ ဦးနွောက်ကြီး ပြင့်ထြက်ြသားတာ ကြီးကိုက ရာဘာက်ည္မွ မဟုတ္တာ။ က်နော်ျေပာတာက ရာဘာက်ည္ဆို ဒီလို ပြင့်ထြက် သြားစရာ အေကြာင်း မရွိဘူးလေ။ ပြင့်ထြက်ြသားတာလေ။ ပြီးတော့ တခ်ို့ သက်သေတြလည်း ရွိပါတယ် ခင္ဗ်။ အိမ်တြေ၊ နံရံတြေမွာလေ က်ည်တြေ ရွိတယ်။ အဲဒါတြေ က်န္တောို့ ကြားတယ် ပေါ့နော်။ ဒါကေတာ့ က်ည်အစစ္ပါပဲဗ်။ အဲဒီမွာ ရာဘာက်ည်တြေလည်း ပါတယ်။ မ်က်ရည်ယိုဗုံးတြေလည်း ပါတယ်။ တောက်လွေ်ာက္ပဲ ကြားနေရတာဗ်ာ။ အခ်က် ၁၀၀ ၊ က်နော် မေရထာမိလို့ အခ်က် ရာကေ်္မာယ်။ အဲလိုကြားနေရတယ်။ အုန်းအုန်းအုန်းနဲ့ ကြားနေရတယ် ဆိုတော့။ ဟုတ္တယ်။ အသံတြေကေတာ့ မတူဘူး။ သေနတ် တြေ အသံတြေ မတူဘူး။ ပစ္တဲ့ အသံတြေလည်း မတူဘူး။
နောက္တခုက ဆြဲတာလည်း ပါတယ္ခင္ဗ်။ တခ်က္တခ်က် ဆြဲတဲ့ အသံတြေ စတင်းဂန်း ဆြဲတဲ့ အသံမ်ိုးလေ။ တောက်လွေ်ာက္ပဲ။ က်န္ကော ဆရာဝန္ဆိုတော့ လက္နက် အေကြာင်းတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒလစပ် ဆြဲတဲ့ အသံတော့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စစ္တိုက်သလိုမ်ိုး ပေါ့ဗ်ာ။ စစ္ကားထဲက လိုမ်ိုးပေါ့။ စတင်းဂန်းနဲ့ ဒလစပ် ဆြဲတဲ့ အသံမ်ိုး။ အဲဒါ က်န္တောို့ ကိုယ္တိုင် ကြားတယ်။ အဲဒါက တောက်လွေ်ာက် ဆြဲပြီး ပစ္တဲ့ အသံမ်ိုး ပေါ့နော်။ အဆက္မျပတ် ဆြဲပြီး ပစ္တဲ့ အသံမ်ိုးတြေ ကြားတယ်။ ဒါကေတာ့ က်န္တောို့ ကြားတဲ့ အသံပဲ။”
မေခ။ ။“နောက္တခုက အဲဒီမွာက ဘယ္လိုကြောင့် အခုလို တင်းမာမျှုဖစ်ြသားတာလဲ ဆိုတာရော သိရပါလား။ ဆရာ စောစောကျေပာတဲ့ သေဘာအရဆို ဆရာတို့က အဲဒီနားမွာ မ်က်ျမင္ကိုယ်တြျေ့ဖစ္ခဲ့ရတာဆိုတော့။ တင်းမာမှု တခုကြောင့် ပစ်ရတာလား။ ဒါမွမဟုတ် နောက္တခုက သူတို့တြေ အမြဲတမ်း သုံးနေက် ရွိတယ်ပေါ့နော်။ သူတို့က အကြမ်းဖက္မှုကျိုပန်ပြီးတော့ ဖြိုခြင်းတယ် ဆိုတဲ့ အေနထားမ်ိုးျေပာတာမ်ိုးတြေ ရွိတယ်။ ဆရာတို့ ဘက္ကေရာ၊ ဘေးက ကြည့်ရတဲ့ အေနဆိုရင် တဖက္ကေန အကြမ်းဖက္မှု လုပ္လာလို့ ဟိုဘက္ကေန ဖြိုခြင်းရတဲ့ သေဘာလား။ ဘယ္လို မ်ားပါလဲရွင့်။”
ဆရာဝန် ။ ။“အဲဒါကို က်နော်တော့ သေခ်ာ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် သေခ်ာ တာကေတာ့ က်နော့်အျမင္က သူတို့က ၄၁ လမ်းပိတ္တယ်။ ၃၅ လမ်း ပိတ္တယ်၊ ရေကားတြေ ပါတယ်။ တချုဖစ်နိုင္တာက ကမ်းရိုးဆိုတာက သဲကားတြေရွိတယ် ခင္ဗ်။ သဲကားတြေက အရွည်ကြီးတြေ။ ၁၂ ဘီးတောင် မကဘူးဗ်။ ဘီးအစိတ်လောက် ရွိတယ္ခင္ဗ် သဲကားဆိုကေလ။ ဒီဘက္က သဲကားကြီးတြေက ပိတ္ထားတယ်။ လမ်းက အထဲကို ဝင္လို့ မရဘူးလေ။ သူတို့က အထဲကို သြားခ်င္တာ ခင္ဗ်။ အထဲမွာ ပိတ္မိနေတဲ့ ရဲတြေ ရွိမယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဖြိုခြဲတျာဖစ္မယ္လို့ က်န္တောို့က အမ်ားဆုံး ယူဆလို့ ရတယ်။
ဒီဘက္ကေတျာ့ပည်သူက လက္နက္လည်း မရွိဘူး။ ဒါပေမယ့်ျပည်သူက တော့ ရွိတယ်။ အဲဒီ ခဲနဲ့ ပစ္တဲ့ လူတြေဆို သူက ထိန်းတယ်။ျပည်သူကျပည်သူခ်င်း ထိန်းတယ် ခင္ဗ်။ က်န္တောို့လည်းျေပာတယ်။ ဘေးလူတြေကလည်းျေပာတယ်။ ခင္ဗ်ာျးပန္မလုပ္နဲ့နော်။ ခဲတြေ မထုနဲ့နော်။ လောက်လေးခြေတြ မပစ္နဲ့နော်။ သင့်တဲ့လူကျေပာတယ်။ လူကြီးတြေ ကလည်းျေပာတယ်။ ပြင့်ပြင့်လင်းလင်းျေပာရရင်တေျာ့ပည်သူသည် ပစ္စရာ လက္နက္လည်း မရွိဘူး။ ပစ္စရာကလည်း ဘာမွ မရွိဘူး။ ခဲတောင် မပစ္ဘူး။ ဒါပေမယ့်ျေပာလို့ မရဘူး။ တခါတခါ သူတို့လူ တြေက ပစ္လိုက္တာလည်ျးဖစ်နိုင္တယ်။ ဒါတြေကေတာ့ ရွိနေတာပဲလေ။ ထြက္တိုင်းမွာပေါ့။ ဒါပေမယ့် စပစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ က်န္တောို့ မရွိဘူး။ က်န္ကော နောက္ဆုတ္လိုက္တယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ က်န္ကော ပရဟိတ သမား ဆိုတော့ နောက္ဆုတ္လိုက္တာပဲ။ အဲဒီ စပစ္တဲ့ အသံ ကြားခ်ိန္မွာ မ်က်ရည်ယိုဗုံး စပစ္တာ။ နောက္ပိုင်းက်တော့ ပိုဆိုးလာတယ်။ ရာဘာက်ည်တြေရာ။ ဟိုဟာ တြေရာ ပစ္လာတယ်။ အဲလိုမ်ိုးပေါ့နော်။ အဲဒီတေျာ့ဖစ်နိုင်ျေခက သူတို့ ပိတ်ြသားတာ၊ လမ်းတြေပိတ်ြသားတာလည်း ပါတယ်။”
မေခ ။ ။“နောက္တခု သိခ်င္တာက သူတို့တြေ ပစ္တဲ့ အခါမွာ ဆရာတို့လည်း ကြားဖူးမွာပါ ဖြိုခြင်းရတဲ့ အဆင့်ဆင့်တြေ ရွိတယ်။ အဲဒီ အဆင့်ဆင့် တြေကိုရော လိုက္နာပြီး သူတို့ ဖြိုခြင်းခဲ့တယ္လို့ ဆရာတိျု့မင္ပါသလားရွင့်။”
ဆရာဝန် ။ ။“ဒါကေတာ့ အဲဒါနဲ့ မဆိုင္ဘူး။ အဲလိုမဟုတ္ဖူး။ အဲလိုမ်ိုး မလိုက္နာဘူး။ သူတို့လိုက္နာမှု ရွိမရွိတော့ မသိဘူး။ လိုက္နာတာတော့ မေတြ့ဘူး။ က်နော် တြေ့နေတာတော့ ဒီအတိုင်း ပစ်နေတာပဲလေ။ အဆင့်ဆင့် ဖြိုခြင်းတာမွ မရွိပဲဗ်။။ ဥပမာ ဒုတ္နဲ့ ရိုက္တယ်ပေါ့ဗ်ာ။ တိုးလာရင် ရိုက္တယ္ဆိုရင်။ တဆင့်ပြီး တဆင့် တက္လာတယ် ပေါ့ဗ်ာ။ ဘယ်သံပေး ညာသံပေး ရိုက္တယ် ဆိုရင် လက္ခံတယ်လေ။ သေဘာက။ သူတို့ အေနနဲ့ လမ်းပိတ်နေတယ်။ လမ်းဖြင့်ခ်င္တယ္ဆိုရင် ကားသမားတြေကိုရွင်းလေ။ ကားတြေကို ဆြဲပြီး သူတို့ဖယ်လေ။ ဘယ် .. ဒီလိုမ်ိုး ဘလိုင်းကြီးနဲ့ ပစ္စရာ အေကြာင်းမွမရွိတာလေ။ အဲဒါတော့ က်န္တောို့ လက္မခံဘူး။ မန္တလေးသားတြေ ဘယ်သူ့သြားမေးမေးဗ်ာ။ အင္တာနေရွင္နယ် လုပ္တဲ့ကိုင္တဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ္ဖူးဗ်ာ တျခားစီပဲ။ အဲဒီလိုမ်ိုးပဲ။ ပစ္ခ်င္လို့ပစ္တဲ့ သေဘာပဲဗ်ာ။ က်နော်တော့ အဲဒီလို ယူဆတယ်။”
မေခ။ ။“နောက္ဆုံး အေနနဲ့ မေးခ်င္ပါတယ်ရွင့်။ ဆရာက တကယ္လည်း ကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဆေးလည်း ကိုယ္တိုင် ကုခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန် တေယာက်ေအနနဲ့ ဒျီဖစ်ရပ် အေပ်ါမွာ ဘယ္လိုမ်ားျေပာခ်င္ပါလဲရွင့်။”
ဆရာဝန် ။ ။“ဟာ ဒါကြီးကေတာ့ဗ်ာ။ မျဖစ်သင့်တာကြီးပါ။ ကိုယ့်ျပည်သူ ကြီးကို။ မျဖစ်သင့် မျဖစ္ထိုက္တာကြီးပါ။ က်နော့် မ်က္စိရွေ့မွာ ဒီလိုမ်ိုး။ တခ်ို့ဆို မူးလဲ သြားတယ်လေ။ သတင်းသမားတြေ တောင္မွ မူးလဲသြားတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဲဒါကြီး ဦးနွောက် ပြင့်ထြက် သြားတာကြီးကို သူတို့ မျမင္ဘူးဘူးလေ။ က်န္တောို့ ဘက္ကေတာ့ ဆရာဝန်တြေ ဆိုတော့ သြေးထြက် သံယိုတြေက မထူးဆန်းပါဘူးလေ။ က်န္တောို့ အတြက်တော့။ ဒါပေမယ့် ဘယ္လျိုဖစ်ျဖစ် စိတ္မေကာင်းဘူးလေဗ်ား။ ဒါ ဘလိုင်းကြီးလေ။ က်န္တောို့က စစ္ပျြဲဖစ်နေတာ မဟုတ္ဖူးလေ။ က်န္တောို့မွာ လက္နက်တြေ ရွိတာ မဟုတ္ဖူးလေ။ က်နော်ျေပာခ်င္တာက ရွေ့တန်း စစ်ျေမျပင် ရွေ့တန်းကို ရောက်ြသား သလိုကြီးဗ် ။ အဲဒါကြီးကျဖစ်သင့်သလား။ လူနေအိမ်တြေဗ်ာ။ လူတြေ နေတဲ့ နေရာ၊ လူနေရပ္ကြက်ကြီး ကိုမွ၊ ရပ္ကြက်တြေ ထဲကို ပစ္တယ်။ ရပ္ကြက် ထဲကို လူနေအိမ်တြေ ထဲကို ပစ္တယ္ဗ်ာ။ စနိုက္ပါတြေ ပါတယ္လည်းကြားတယ်။ ပြီးတော့ ပိုဆိုးတာက သူနျာပုစရာ ကောက္လို့ မရဘူး။ ဆိုတာကြီးကေတာ့ဗ်ာ ဘယ္လိုျေပာမတုန်း ဆန္ဒျပမှု ဖြိုခြင်းတာလဲ မဟုတ္ဖူးဗ်ာ။ ဘယ္လိျုေပာမလဲ စစ်ျေမျပင္လိုကြီး ခ်သြားတာဗ်ာ။ စစ္ပြဲတခု ရောက်ြသား သလိုပဲ ဗ်ာ။ က်န္တောို့တောင္မွာ ပုန်းနေရတယ် ဗ်ာ။ ဆရာဝန် အဝတ်အစားနဲ့လည်း ထြက္လို့ မရဘူး။ ထြက်ရင် ပစ္မွာ။ က်နော့်အျမင်ျေပာရရင် ဒါကြီးက လုံးဝ မျဖစ်သင့်ဘူး။ က်န္တောို့ စစ်ျေမျပင္လည်း မဟုတ်။ သာမန်ျပည်သူတြေ နေတဲ့ အိမ်တြေ လေဗ်ာ။ အဲလိုကြီးကေတာ့ က်နော့်အေနနဲ့ စိတ္လည်း မေကာင်းဘူး။ျဖစ္လည်း မျဖစ်သင့်ဘူး။ က်န္စောိတ္ထဲ ထင္တာကေတာ့ သာမန်ျပည်သူတြေ ထဲမွာပဲ အကာအကြယ်ပေးရမယ် ထင္တာ ၊ အခုကေတာ့ ချုမင္လိုက်ရတျဲ့မင္ကြင်းကြီးတြေကေတာ့ ရွေ့တန်း ရောက်ြသား သလိုမ်ိုးကြီး အဲလိုကြီျးဖစ်ြသားတာ။
မေခ။ ။ ဆရာတို့က ၄၁ လမ်း ဘုန်းကြီးကေ်ာင်းထဲမွာ ဆေးကုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်အဖြဲ့နဲ့ တူတယ်နော်။
ဆရာ ။ ။ ဟုတ္တယ် .. ဟုတ္ပါတယ်။
မေခ။ ။ ကေ်းဇူးပါရွင့်။